Maaskarada difaaca ee la tuuro, maaskarada difaaca ee KN95, galoofyada Nitrile - Sinnovation
Bacda warqadda ah
Ku xirxirida baakado isku dhafan oo aan tolmo lahayn
Baakadaha aan tolmo wanaagsan lahayn
Baakadaha dareeraha la caddeeyay
Baakadaha filimka aluminium / aluminium
Bacda waalka PP
Baakadaha dekedda waalka ee PE
Baakadaha guud ee PE
Bacda Fibc / bulk
Bacda Bopp waxay u isticmaashaa polypropylene-ka dharka la isku qurxiyo sida dharka jirka oo ka dhigi kara xirmadaada inaad ku raaxaysato adkeysi weyn Naqshad kaladuwan sida (dhabarka dambe, wareegsan, suulasha suuxdinta, daloolinta, daabacaadda ka hortagga taraafikada iyo gussets iwm) ayaa la kulmi kara macaamiisha shuruudaha kala duwan.
Marka loo eego qaababka, waxaa jira boorso jumbo ah oo wareegsan, jumbo laba jibbaaran iyo U nooca bacda jumbo oo leh wareegga sare ee kor u qaadista, ama wareegga wiishka dhinaca ama wareegga wiishka ee hoose. Caadi ahaan waxay leedahay dheecaan soo gala iyo ka soo baxa qulqulka.
Bacda warqadda poly1 Waxay ku saleysan tahay bacda pp, oo sidoo kale loogu yeero dhar gaagaaban, isku duubista filimka iyo xaashida habka tuubada cajaladda ah. Waxaa loo adeegsadaa xirxirida noocyada kala duwan ee walxaha kiimikada ah, sida budada iyo alaabta ceyriinka ah sida POM, ABS, polystyrene, poly-formaldehyde, polyvinyl chloride, styrene butadiene caag, injineernimada balaastigga iyo taxane ah budada, qalabka granular iwm.
pp tolmo wanaagsan
Bacda PP-ga, ee loo yaqaan 'bag skin skin', oo ka mid ah caagagga, ayaa loo isticmaalaa baakadaha. Qalabka ugu weyn waa polypropylene (PP). Waxaa la sameeyaa inkasta oo loo yaqaan 'extrusion', oo ku fidaysa dunta cajaladda, tolidda iyo sameynta bacda. Isticmaal: Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay xirxirida noocyada alaabada budada ah iyo kuwa granular.
Maaskarada difaaca ee la tuuro, Nadiifiyaha Gacanta
Mashiinka maaskaro, maaskarada difaaca ee KN95
Shining star plastic Co., Ltd. waa shirkado caalami ah oo wax soo saarka iyo iibinta alaabada balaastigga ah iyo wax soo saarka baakadaha waraaqaha ah, daboolaya aag 100 hektar ah, laanta Fiyatnaamiis ayaa daboolaya aag 50 hektar ah, geedka Cambodia wuxuu daboolayaa aag 50 hektar ah. Iyada oo mashiinka sawir sare, gooldhalinta wareegga, mashiinka daabacaadda midabka, mashiinka laminating, mashiinka samaynta bacda, mashiinka daabacaadda, mashiinka afuufa filimka, wax soo saarka granulator iwm line, xoog farsamo si ay u gaaraan heerka sare ee caalamiga ah. Shirkaddu waxay leedahay boqolaal koox xoog farsamo ah, oo leh wax soo saar hodan ah iyo khibrad maamul. Shirkaddu waxay ku qalabeysan tahay qalab baaris xirfadeed, koox kormeer xirfadeed iyo xeerarka iyo qawaaniinta kormeerka adag, iyo iyada oo loo marayo nidaamka shahaadada nidaamka maaraynta tayada iyo shahaadada QS, tayada ayaa gaartay heerka ugu sarreeya isla warshadaha. Tan iyo markii la aasaasay shirkadda, "istaraatiijiyadda ugu horreysa, guusha ganacsiga, maaraynta jihaysan" falsafadda ganacsiga, tallaabo tallaabo ah si aad u noqotid Shiinaha shirkado isku mid ah oo ku jira baaxadda ganacsiga, kuwa ugu ballaaran ee saamaynta ku leh shirkadaha warshadaha.
Nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah ama ballan u sameyso
Waxaan nahay xirfadlayaal ku howlan waji-xidhka, jeermis-dileyaasha, xalka bakteeriyada, bakteeriyada bayoolojiga, cilmi baarista dawada xoolaha iyo horumarinta, soosaarka iyo iibinta shirkadaha farsamada sare.
Cinwaanka: Galbeedka wadada Youai iyo waqooyiga wadada Yongkang, Weifang Development Development Zone
Gacmo gashi nitrile
Maaskarada difaaca ee loo yaqaan 'KN95'
Shiinaha ayaa noqday soo saaraha ugu weyn iyo ...
Shiinaha ayaa adkeeyay xeerarka hore ...